Thwebula Mobile9 3.3.2 – Vessoft
Mobile9 – isofthiwe thwebula izicelo, imidlalo kanye software. Mobile9 iqukethe izigaba eziningi zihlukaniswe ukuhluza, ukukala, ukukhululwa date kanye nabaholi yokulandwayo. Isofthiwe ubonisa incazelo eningiliziwe izicelo ezikhethiwe noma imidlalo futhi kwenza ukubuka izinhlelo zokusebenza ukusebenza ezifanayo. Mobile9 iqukethe module of the control sabazali, esihlinzeka kokuhlala ephephile izingane abasebenzisi enkonzweni. Futhi isofthiwe ikuvumela ukubuka uhlu yokulandwayo, izicelo ungeze ku amabhukhimakhi futhi iyatholakala update. Mobile9 ine interface enembile futhi kulula ukuyisebenzisa.
Inani elikhulu izicelo ezahlukene kanye imidlalo
Izigaba ezahlukene okuqukethwe ezahlukene
Incazelo eningiliziwe izicelo kanye imidlalo
Amehlo yokulandwayo kanye nohlu izifiso
Amazwana on Mobile9:
Mobile9 Ahlobene software: